Kwete, iyo yekare iPhone hainonoke neIOS 11 | IPhone nhau
Zvinoitika gore rega rega mushure mekuburitswa kweshanduro nyowani yeIOS: vashandisi vanovandudza vanogunun'una nezvekupunzika, kunonoka uye kuti hupenyu hwebhatiri hushoma sei. Zvichemo nezvekuti Apple inosiya sei zvishandiso zvekare neku "kumanikidza" vashandisi kuti vavandudze maPhones avo ari kuwanda pawebhu rese.nepo vamwe vachiramba kuti maPhones avo anoshanda zvakanaka pasina matambudziko.
Ndiani ane chikonzero? Ichokwadi here kuti Apple inoita kuti maPhones ayo ekare aite zvakanyanya nekuvandudzwa kuitira kuti vanhu vamanikidzwe kuchinjisa iPhones? Iko kune kurongwa kushaya nguva? Chidzidzo chakaburitswa naFuturemark chinoramba zvese izvi nekuona kuti zvidzoreso zvinochengeta iyo iPhone ichishanda nemazvo uye ichiratidza kwatiri nemiedzo inoitwa kwemwedzi yakawanda.
Futuremark ine application yekuti iyo App Store inoita performance performance pane yedu iPhone, inonzi 3DMark. Iyo bvunzo dzinoitwa paGPU (mifananidzo) uye CPU (processor) chikamu, uye kwemwedzi vanga vachiunganidza ruzivo kubva kuvashandisi vakaita miedzo pamhando dzakasiyana dze iPhone, kubva pa5s kusvika pa7. Ruzivo rwese rwakaratidzirwa mumagirafu atinogona kuona mwedzi nemwedzi huwandu hwepakati hunowanikwa nemayedzo akaitwa: mune grey mhedzisiro yeIOS 9, nebhuruu idzo dzeIOS 10 uye nemaranjisi idzo dzeIOS 11. Sezvauri kuona mune iyo iPhone 5s, yechinyakare modhi iyo yakagamuchira iOS 11, mutsauko ishoma, isu inogona kutotaura kuti ndeipi yakajeka neIOS 11 kupfuura zvayaive neIOS 9.
Panyaya ye iPhone 66, kuvandudzika kuri pachena neIOS 11 zvichienzaniswa neIOS 9 uye iOS 10, uye ichokwadi kuti neIOS 11 bvunzo dzeCPU dzakaipisisa kupfuura neIOS 9, asi hadzina kumbochinja kana ichienzaniswa neshanduro dzazvino dze iOS 10.
Mune iyo iPhone 6s misiyano yacho midiki, uye kunyangwe iOS 10 yaive yekutanga kuvandudzwa mune ese maGPU neCUU, gare gare yakadzikira zvishoma uye nekuuya kweIOS 11 iyo nhanho yakaramba isina kuchinja.
Chekupedzisira, iyo iPhone 7 yakavandudza mashandiro emifananidzo achienzaniswa neshanduro dzazvino dzeIOS 10, uye iyo CPU inoramba isingachinje kana ichienzaniswa neshanduro dzakafanana.. Zvichida isu tiri kutarisana nedhivho uye nekufungidzira dhataIkozve kune zvinoonekwa zveumwe neumwe izvo zvisingachinje kana uchiona aya mairafu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Kwete, akura maPhones haasi kunonoka paIOS 11
Kuita kwacho hakuna kudonha zvakanyanya asi kwave nekuderedzwa. Ichokwadi kuti iOS 11 inoita mamwe mashandiro ayo anonyanya kushandiswa pane nyowani Hardware, saka tinonzwa mutsauko iwoyo. Asi ini ndinofunga kuti zvese izvi isu tinofanirwa kukoshesa kana tiine maviri kana matatu mamwe magadziriso. Mune iPhone 6 ikozvino ne11.0.2 zviri kufamba zvakanaka asi iwe enda kune iyo iPhone 7 kana 8 uyezve, unofunga kuti zvese imarara.
Saka iyo iPhone 4 haina kukanganisa mashandiro eiyo iOS 7 …….
Kwete kuti ichataura zviuru zvezvichemo zviri muApple forum uye kuudza yangu iPhone 6 kuti iri kufamba sedhongi rinononoka, ine chando chidiki uye nekhibhodi inotora gore kuti ibude
Pindura kuna Salam
Ndine dhata yakawandisa ... asi kana ndisina kunzwisisa, iyo CPU neGPU bvunzo dzinoreva mashandiro eiyo iPhone ... Pane chimwe chinhu chine chekuita nebhatiri?
Ndine iphone 6 iyo ine ios 10 yainonoka, asi ikozvino ios 11 uye zvinotevera zvidiki zvadzokororwa yave foni isingafadzi kushandisa, kunonoka kwenguva refu kuvhura kunyorera, hoko dzinogara dziripo, khibhodi inononoka haina kunonoka ...
Saka usandiudze milongas.
Ini ndakafanana newe ... Hehehe ios 9 pane iphone uye ipad
Pindura kuna Jb
Sezvandareva mune chinyorwa chandakanyora, mabhenji akafanana neaya ekumhanya bvunzo kuti aongorore simba reiyo terminal munzvimbo dzisingateedzere iko iko kushandiswa kwemushandisi.
Kunyangwe aya mabenchmark achiti simba reiyo terminal rinoramba rakafanana, izvo hazvireve chero chinhu, sezvo iyo firmware inogona kunge isina kunyatsogadziriswa, ichikanganisa mashandiro emazamu ekare.
Izvo zvinoita sekunge zvinouraya kwandiri ndezvekuti haugone kudzokera kuIOS 10, kunyangwe iwe uchida. Uye chinonyanya "kunakidza" ndechekuti kana ukanyunyuta nezve bhatiri, unofanirwa kuchinja skrini, kana chero chimwe chinhu chinoda kutariswa pamunhu muApple Stores, unofanirwa kunge uine iyo yazvino vhezheni yeIOS yaiswa.
Yangu iPhone 6 inopesana neaya manhamba, ini ndinoigadziridza kuenda kuIOS 11 uye inoenda zvishoma zvishoma, pandinoburitsa bhatiri rese uye ndobva ndaibatanidza kubhadharisa ndichishandisa chajaja yekutanga zvinotora maminetsi makumi maviri kusvika makumi maviri nemashanu kuvhura. kungovhura, ndisina kuishandisa, kutanga zuva ne20% kubhadharisa na25 masikati ndatova ne100% yekuchaja. Chimwe chinhu chakafanana chakaitika kune mumwe munhu kana ini ndiri mumwe wevashoma vasina kukodzera nhamba ????
Pedro J akadaro
Kune yangu chikamu, yangu 6Gb iPhone 16 Plus inoenderera ichishanda mushe mushure mekuvandudza kune iOS 11, uye iyo bhatiri dhure rinowirirana pamusoro penguva yekushandisa. Pane sarudzo dzandaisarudza muIOS 10 senge dhizaini, ukobvu uye font, maficha akadai seMamiriro ekunze anoratidza ruzivo rwakamanikidzwa, shanduko pakuvhura foni inoonekwa zvishoma zvishoma uye dhizaini yekombuta nyowani haindibvumidze, asi dzimwe nhau Vanoratidzika kwandiri kumberi senge iyo mode "Kutyaira" uye "Emergency SOS", pamwe neshanduko mukugadzirwa kweMagadzirirwo.
Sezvinoratidzwa mune yapfuura chirevo, kana uchivandudza iyo Apple Watch hapana kudzokera kumashure, uye kana iwe uchida kubatanidza iyo iPhone inofanirwa kunge iri pane yazvino vhezheni yeIOS. Izvo zvakatoitika kwandiri muzuva rayo apo ini ndaive neIOS 9 neJailbreak isina kubhadharwa, ini ndaifanira kugadzirisa kune iOS 10 kuti ndikwanise kuwiriranisa wachi nharembozha.
Kwazisai nekutenda kuActualidad iPhone yezvinyorwa zvako, ndanga ndichitevedza dandemutande kubva yangu yekutanga 3G XNUMXG payakasvika kuSpain (uye nenzira iyo yaive "yakabikwa" mukupedzisira kugadzirisa kweIOS).
Pindura Pedro J
Ini ndinofunga hausi kuzotinyengera nenhamba, ichokwadi kuti iyo iPhone 6, iyo yandinayo, haina kushata, asi inononoka ios 11, yakasara muappstore, pane iyo keyboard, mune akasiyana mafomu, kunyangwe mune vekuzvarwa
Kune avo vari kuita zvakashata, ingovaudza:
1) mangani mazuva apfuura wawakaisa iOS 11? Zvinogona kutora mazuva akati wandei kupedzisa indexing, kushandura, uye zvimwe zvinhu zvainoita kumashure izvo zvinoita kuti foni iite kunge inononoka pakutanga uye ichidhonzera hupenyu hwakawanda hwebhatiri. Mushure memazuva mashoma, anopedzisa kuita zvinhu uye zvese zviri kuenda sezvazvinofanira.
2) wakamboedza kuisa ios11 kubva pakutanga? Ini ndaive nematambudziko ekuisa beta vhezheni dzeIOS 10 uye pakazobuda vhezheni yekupedzisira, ndaienda zvakaipa Ini ndakadzorera kubva pakutanga uye zvese zvakatanga kuenda zvinoshamisira. Na ios11 zvakafanana zvinogona kuitika. Kubva pakutanga uye kunyange pasina kudzorera backup. Zvese zvakachena.
Ndakamirira rinenge svondo neOS 11 uye ndakadzokera kuIOS 10.3.3 nekuti bhatiri harina kuona kuvandudzwa uye NDINOGARA ndichichinja vhezheni yeIOS (yenhamba, kureva kuti, kubva pa9 kusvika 10, kubva pa10 kusvika 11, nezvimwe. ...) Ini ndinoita kudzoreredza kwakachena uye senge iPhone nyowani uye yanga ichienda kunge dhongi.
Kutuka kwakadii kungwara kwevaridzi vePhones 6 ne6S !!!
Zvino zvichave kuti zvinoitika ndezvekuti kusaziva kwedu kuri kutinyengedza kuti titende kuti iyo iPhone inononoka kupfuura zvinoita sekunge tinotenga imwe nyowani.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti iwanikwe (yakatakura uye yakagadzirira kushanda) kunyorera pane iPhone 6 ine iOS 11 uye zvakatora nguva yakareba sei neIOS10?
Kumba isu tine iyo iPhone 6 uye iyo iPhone 6 pamwe, mafoni maviri haashande sepamberi pekuvandudzwa, uye ihwohwo humbowo, Apple inogona kubhadhara mamirioni kune vamwe kuti vataure kuti hakuna kurongwa kusakwana, asi chokwadi hachirevi nhema .
Ndine urombo, ini handibvumirane newe, kune mazana ezviuru zvezvichemo uye izvo hazvisi zvengozi.